Ho an’ny Pelaka, Ny Hoe “Nofinofy Amerikàna” Dia Fintinina Amin’ny Hoe Fitadiavana Toerana Hahafahana Miaina Am-Pilaminana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Marie-Pascale Mercier
Voadika ny 08 Jona 2017 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Ελληνικά, Português, Español
Mpikatroka LGBTI milatro eny an-dalamben'i San Salvador mandritra ilay diabe “Gay Pride LGBTI” (Diabe Reharehan'ny Pelaka …). Sary an'i María Cidón Kiernan, famoahana nahazoana alàlana avy aminy
Famintinana ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny CONNECTAS ity. Naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Andosiran-dry zareo i Goatemalà, i Salvadaoro na koa i Honduras satria ilàna vaniny izy ireo noho ny mari-panondroana ara-pananahana ananany. Ny iavahany amin'ireo hafa mpifindramonina, rehefa mandositra ry zareo dia vao mainka arahana sy ilàna vaniny bebe kokoa. .Araka izany, ny “nofinofy amerikàna” ho azy ireo dia ny fahitàna fotsiny izay toerana iray hahafahana miaina am-pilaminana.
Midika fanavakavahana ny maha-vehivavy pelaka anao ao Salvador, ao Goatemalà sy ao Honduras. Ny miaina miaraka amin'ny mari-panondroana ara-pananahana dia manery anao hiatrika ireo fanafihana atosiky ny fankahalàna, izay mazàna no mijanona tsy misy arakaraka / tsy misazy.
Manerana an'i Amerika Latina dia ireo firenena ao amin'ny Telozoro avaratr'i Amerika Afovoany no manana ny taha ambony indrindra amin'ny herisetra atao amin'ireo pelaka. Ny Janoary 2008 hatramin'ny Desambra 2016, nisy tetikasa iray an'ny fikambanana “Transgenre Europe (TGEU)” nahangona tatitra miisa sivy amby dimampolo amby zato milaza famonoana pelaka tao amin'ilay faritra: i Honduras no voalohany ao anaty lisitra miaraka aminà heloka bevava sivy amby valopolo, arahan'i Goatemalà (efapolo) ary Salvador (telopolo). Ambangovangony ireo tarehimarika ireo satria marobe ireo heloka bevava no tsy misy mitoroka.
Amin'ny alàlan'ny taovam-pananahany no anavahan'ny polisy sy ny mpampanoa lalàna ireo niharam-boina fa tsy araka izay mari-panondroana nofinidiny, ka mahatonga ny tsy fananana antontanisa ofisialy momba ny famonoana ireo pelaka. Manampy an'izany ny tsy fisian'ny fanadihadiana izay ireo vehivavy pelaka no tena ianjadiany, ireo izay tena marefo amin'ny resaka heloka bevava atosiky ny fankahalàna.
Ireto farany ireto dia tsy hoe fotsiny entanin'ny fikatsahana vintana vaovao na ny fandosirana faobe ireo herisetra mihanaka, fa koa maniry ny hahita toerana hahafahan'izy ireo miaina tsy misy fanavakavahana, toy ny asehon'ity fanadihadiana ity, notontosain'i María Cidón, Priscilina Hernández sy Prometeo Lucero tao Meksika, Salvador ary Etazonia.
Raha nitanjozotra ho any avaratry ny firenena, ireo pelaka mpifindramonina dia vao mainka niharan'ny fanalàm-baràka misimisy kokoa, toy ilay iray nanjo an'i Rafael Antonio, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe “Eléctrica”.
Eléctrica dia niainga avy any Honduras ho any Meksika ary manoritra ny fomba nitrangan'ny fanalàna baràka nahazo azy :
Ao Choluteca (ao Honduras) ny tena fahita betsaka dia ny fanolànana ireo olona pelaka, ny fanaovana tsinontsinona, ny daroka, sns…. Ireo mareros no voalohany indrindra amin'ny mpisotasota anay satria teren'izy ireo hiditra ho mpikambana ao amin'ny andiany misy an-dry zareo izahay ary mino aho fa tsy rariny izany. Tamin'io fotoana io dia niteny aho hoe : hivoaka hiseho vahoaka aho, ary hanaiky ny maha-izaho ahy, satria manana lanjany ny tenako.
Ao Meksika, tsy nisy fihatsarany ny zavatra rehetra. Rehefa niditra tao amin'ilay firenena, ny 1 Septambra 2016, niharan'ny herisetra sy voatsindrona antsy izy tao Tenosique, faritanin'i Tabasco. Nangataka fahazoandàlana noho ny maha-olona i Eléctrica, saingy nolavina satria tsy ampy tsara ireo porofo nentiny nangataka fialokalofana, na dia efa voatsatoka antsy aza izy.
Ohatra iray amin'ireo sorona nataon'ireny vehivavy ireny mba hiarovany tena amin'ny manodidina azy ireo ny an'ilay Salvadoriana Mema Perdomo. Ampangainy ireo maras, andian-jiolahy, ho antony nandaozany ny fireneny :
Folo taona lasa izao no nandaozako an'ì Salvadaoro.. [Ny iray tamin] ireo namako tiako indrindra no nodorana velona tao Usulután, rehefa avy notondrahan'ireo mareros solika. […] Haiko tsara ireo mareros ireo, noho izany dia norahonan-dry zareo aho ary dia nisahotaka tanteraka ka dia nandeha nankaty.
Fotoana vitsy taorian'izay dia tonga tao Houston, Etazonia izy, toerana niarahany nipetraka tamin'ny rahavaviny nandritry ny fotoana elaela, na dia tsy nahatsiaro ho nilamina mandrakariva aza izy.
Na dia heverina ho toy ny iray amin'ireo renivohitry ny fahasamihafàna any Amerika Latina aza ny tanànan'i Meksiko, tsy voatery hiaina anatin'ny fepetra tsara indrindra akory ireo pelaka any.
Nivoitra izany rehefa injay i Paola, pelaka mpampanofa vatana, maty noho ireo tifitra maromaro nataon'ny olona iray naka azy, tao anatin'ny fiarany. Ora vitsy taorian'izay dia voasambotry ny polisy ilay lehilahy ary nafahana noho ny “tsy fahampian'ny porofo”. i Kenya namany sy ireo hafa mpiaramiasa aminy no nanaraka ny vatampaty nisy ny vatana mangatsiakan'i Paola nanomboka teo amin'ny tranompaty ka hatrany amin'ny ‘Avenida de los Insurgentes’, ary nametraka ny vatampaty teo afovoan'ny arabe (izay mamakivaky ny tanàna manontolo ao Meksiko avy any avaratra mianatsimo). Nobahanan-dry zareo nandritry ny ora maromaro ny arabe mandra-piavin'ireo polisy mpandrava korontana.
Daniela, indray, voatery nandositra ny tanànan'i Mexico, toerana izay tsy nitsahatra naharaisany filana sotasota avy amin'ireo mpiaramiasa aminy.
Tao an-tanànan'i Meksiko, nosotasotaina aho ary dia nanapaka hevitra ny hanohy ny diako. Tao Tijuana nahatsiaro ho voaray tsaratsara kokoa aho. Ny fitozoana manao zavatra dia mahatonga anao hanadino ireo zavatra nanjo anao. Adinoko io filam-baniny rehetra io, io fanavakavahana rehetra io. Rehefa mandeha ny fotoana, ny herisetra dia mamadika anao ihany koa ho lasa olona mahery setra ary tsy misy vahaolana hafa afa-tsy ny manao herisetra rehefa mitaky izany aminao ny toedraharaha iray.
Indraindray, ny fandosirana dia ilaina ary ny fangatahana fialokalofana ao Meksika sy Etazonia no fomba haingana indrindra hahazoana fiarovana. Saingy amin'izao fotoana izao, tsy azo antoka intsony io làlana iray io.
Ao Meksika, ao amin'ny sisintany voalohany any ivelan'ny Telozoro avaratra, tsy dia misy loatra ivontoerana ho an'ireo mpitsoaponenana ary na izy ireny aza dia iharan'ny fanavakavahana. Somary avarabaratra kokoa, any amin'ireo vohitra ao amin'ny sisintanin'i Etazonia, tsy azo antoka ihany koa ny fiarovana ny aina.
Rehefa eny ampamakivakiana an'i Meksika mba hiampitàna ny sisintany ho any Etazonia ireo vehivavy pelaka, iray amin'ireo toerana mba manome fitsaharana sy tsy misy fanavakavahana ny Refuge La 72 ao Tenosique, faritanin'i Tabasco.
Yolanda no mitantana ny “Zaridainan'ny Lolo”, hotelin'ambanivohitra iray ao Tijuana, ary izy no manazava fa henjana ny fanavakavahana any amin'ireny ivontoerana fandraisana ireny. Misy ivontoerana ara-pinoana miisa sivifolo, fa tsy misy na iray aza hotely tena mifanaraka amin'ny filàn'ireo olona pelaka.
Perla Hernández no mitantana ny “Maison du Sacré Coeur Exilé”. Hatramin'ny 2012, dia sady mandray ireo tsy manana hialofana izy no mampiantrano ihany koa ireo olona miaina an-tsesitany mivenjivenjy eny akaikin'ny sisintany. Afaka mandray olona hatramin'ny efapolo ilay trano. Pelaka i Perla, ary ny faran'ny herinandro izy no miasa manaramaso ny tosidràn'ireo mipetraka ao.
Rubí Juárez no mitantana ny “Ivontoerana fiahiana manontolo ny pelaka” ary nanao fanisàna ireo vehivavy ao amin'ny faritra fampanofàna vatana sy ireo trano fisotroana ao Tijuana. Araka ny voalazany, ny tsy fahafahana mahazo fikarakaràna ara-pitsaboana, fanabeazana ary asa dia noho ny fiheveran'ny maro amin'ireo pelaka fa tsy mba mendrika hanana zo izy ireo, ary dia tena mitsitokotoko be mihitsy.
Ireo pelaka tsy nahavita nahita izay hialokalofany tao Meksika dia manohy ny diany mankany Etazonia, ka any izy ireo dia miseho eo anatrehan'ireo manampahefana mba hangataka fialokalofana. Mihisatra ny dingana, ary matetika ireny vehivavy pelaka ireny no mandalo taona maro miaina anaty fahasahiranana miditra anaty fiarahamonin'ny firenena iray tsy azy ireo, sy ny tahotra ny horoahana indray hiverina any amin'ilay tsy maintsy nandosirany.
Ao Etazonia, vao mainka miha-henjana ny politika momba ny fifindràmonina. Hatramin'ny 2012, nitombo avo dimy heny ny isan'ireo fangatahana fialokalofana nataon'ireo olompirenena meksikàna sy avy any amin'ny Telozoro avaratra no mbola miandry fankatoavana.
Na neken'i Etazonia nanomboka tamin'ny 1994 aza ny fisian'ireo olona LGBTI ho toy ny vitsianisa atao antsojay, hatramin'izao tsy misy fanisàna vita momba ny isan'ireo tranganà fialokalofana noho ny fironana ara-pananahana na noho ny mari-panondroana ho lahy na vavy.
Ny Ivontoerana ho an'ny Hetsika Amerikana ho Fampandrosoana (CAP) dia nanandrana ny hameno io fahabangàn'ny antontanisa io tamin'ny alàlan'ny fampiasàna ireo tranga nokirakirain'ny fikambanana “Immigration Equality (IE)” sy ny “Human Rights First”.
Tamin'ny 2010, raha roa ireo fangatahana fialokalofana nataon'ireo pelaka avy any Meksika sy ireo firenena hafa ao Amerika Latina, dia lasa telo amby roapolo izany tamin'ny 2016. Avy any amin'ireo firenena ireo ny telo ampahafolon'ireo pelaka, saingy tsy manome afa-tsy ny ampahany zara raha misy amin'ny mponina izay mila io fiarovana io izy ireny, na ireo izay afaka manao izany fangatahana izany. Marobe ireo mijanona mipetraka anatin'ny tsy ara-dalàna miaraka amin'ny tahotra ny ho voaroaka.
Ny fanadihadiana feno dia azonareo jerena ato.